Dacwooyinka IT laga gudbiyo oo aan loo baarin hab ku habboon - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Steven Kreuzer/Flickr
Dacwooyinka IT laga gudbiyo oo aan loo baarin hab ku habboon
La daabacay onsdag 5 november 2014 kl 11.00
Dunuubta la galo ee la xiriira aaladda isgaarsiinta teknooloojiyada casriga ah (IT) ayaan inta badan gaarin heer lagu rido xukun maxkamadeed, sida uu qoray war-geeyska Dagens Nyheter (DN) oo baaritaan amuurtaa ku sameeyay.
War-geeyska DN ayaa baaritaan ku sameeyay dacwooyin laga soo oogey falal la xiriira in si aan sharciga waafaqsaneyn lagu galo shaashado oo gaarsii-san 2 100, kuwaasina oo illaa hadda hor-seedey iney keliya laba ka mid ah uu xukun maxkamadeed ku dhaco. Halka dacwooyinkii harey dhammaantood la dhigey miiska hoostiisa ama ey weli socdaan.
Baaritaanka war-geeyska DN ayaa muujinaya in ciidanka ammaanku baraf saareen dacwooyinka inkasta oo ey jireen caddeeymo wax ku ool ah. Tusaale ahaan shirkad ka howl-gasha magaalada Göteborg oo sannadkii ina dhaafay lagula kacey fal in weerar buux dhaafis ah lagu soo qaadey shaashaddii internet-ka ee shirkadda, falkaasina oo sababay in shaashaddii la demiyey. Saraakiil shirkadda ka tirsanaa ayaa dacwad middaa ka gudbiyey iyagoona caddeeymo hor dhigey dembi-baareyaashii ciidanka ammaanka. Maalin dabadeed ayey ciidanka ammaanku baraf saareen baaritaankii, iyaga oo aan weliba weydiin war-bixintii.
375 ka mid ah dacwooyinka gaarsii-san 2 100 ee war-geeyska DN uu baaritaanka ku sameeyay ayaa hoos loo dhigey isla-maalintii ama maalintii xigtay. Halka 1 300 oo dacwadood hoos loo dhigey muddo toddobaad gudihiis ah.
Ulrika Sundling, oo ka howl-gasha hoggaanka sare ee ciidanka ammaanka kuna howlan dembiyada la xiriira IT, ayaa sheegtay inay la xiriirto aqoon yaraanta saraakiisha ammaanka ee howlahaa, mar ay la hadleeysay war-geeyska DN. Iyadoona ay akadeemiyada ciidanka ammaanku dib u eegis middaa ku sameeynayso iyo nsidii saraakiisha loo siin lahaa aqoon ku filan ee dhanka IT.
(Sida ay sheegtay hayadda talo-bixinta ee ka hor-tatga dembiyadu iney kor aad ugu kaceen 6==% muddo afar sannadood ah dembiyada salka ku haya aaladda IT-ga.